Ergo ka baxday shirka Magaalada Jowhar, waxayna ku laabanayan Baledweyne – STAR FM SOMALIA
Ergo ka baxday shirka Magaalada Jowhar, waxayna ku laabanayan Baledweyne
Wararka ka imanaya Magaalada Jowhar, ayaa sheegaya qaar ka mid ah ergada in ay isaga baxday shirka, sababo ku aadan iyagoo cabasho ka keenay qaabka beelaha loogu qaybiyay Xildhibaanada Baarlamaanka lagu wado inuu yeesho Maamulka Gobolada Shabellaha Dhexe & Hiiraan.
Ergadan oo Talaadadii Magaalada Jowhar kulan kula qaadatay wefdiga Urur Goboleedka Igad, ayaa laga raaligeliyay shaxda ay soo saartay Wasaaradda Arrimaha Gudaha, hase yeeshee waa ay u cuntami weyday.
Ibraahim Sheekh C/raxmaan oo ka mid ah ergadaasi, ayaa sheegay inay isaga tagayan Magaalada Jowhar, iyagoo dib ugu laabanaya Gobolka Hiiraan, oo ay ka yimaadeen.
Ibraahim Sheekh C/raxmaan oo la hadlay Idaacadda Shabelle, ayaa sheegay in beelaha qaarkood lagu sameeyay cadaalad darro, sidaasi daraadeedna ay go’aansadeen inay isaga baxaan shirka.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in ay jiraan ergooyin kale oo ka baxay shirka, markii ay ku qanci waayeen cudur-daarka ay u muujisay Igad.
Ibraahim Sheekh, ayaa dhinaca kale sheegay inay ku biirayaan shirka lagu wado in uu ka furmo Magaalada Baledweyne, ee lagu doonaayo in Maamul Goboleedka loogu soo dhiso Gobolka Hiiraan.
Baledweyne waxaa Talaadadii looga dhawaaqay in la qabanayo shir lagu soo dhisayo Maamul Goboleed u gaar ah Gobolka Hiiraan, kaasoo sida la sheegay la diyaariyay Dastuurkii uu yeelan lahaa.
Puntland oo xukun ku riday 54 ka mid ah Shabaabkii lagu qabtay deeganada Puntland